Wafdi Caalami ah oo gaaray Garoowe & Madax qaabishay+Sawiro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdi Caalami ah oo gaaray Garoowe & Madax qaabishay+Sawiro
Ardaan Yare 17 November 2019
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland, Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda Hayádda laanqayrta cas ee ICRC oo uu hogaaminayo Madaxa ICRC ee dhawaan loo soo magacaabay Soomaaliya Mr Juerg Eglin.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa Madaxda Hayádda ICRC uga mahadceliyey booqashadooda, wuxuuna kadib ka dhegaystay warbixin ay ka siiyeen halka ay marayaan howlaha gargaar iyo bani’aadanimo ee ay ka wadaan deegaanada Puntland.
“Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa u sheegay Madaxda Hayádda ICRC in waxqabadkooda ay ku saleeyaan baahiyaha deegaanada ka yimaada iyo sidii looga jawaabi lahaa sida ay u kala muhimsanyihiin” Ayuu yiri Jaamac Dabaraani, Afhayeenka Ahna Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Puntland.
Somaliland oo looga cabsi qabo in ay u dunto Faragelinta dowlada federalka !
Wafdi ka socda Dowladda Federaalka oo Shir uga qeyb-galaya Garoowe